कात्तिक १७, २०७४ गत वर्षको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अठोट लिँदै उज्यालो नेपाल अभियान शुरु गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्व एक सफल नेतृत्वका रुपमा दर्ज भएको छ । उज्यालो नेपाल अभियानमा आम नेपालीले समेत साथ दिएपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ सफल हुन पुगे । तर, एक वर्षको बीचमा घिसिङका कतिपय कदम विवादित समेत बने । बल्ब खरिद प्रकरण, सोलार प्लान्ट ठेक्का ठूलो विवादका रुपमा देखिए पनि घिसिङ भने यो वर्षको हिउँदमा कतै पनि लोडसेडिङ हुन नदिने अभियान सफल पार्न कँस्सिएका छन् । उनै घिसिङसँग लोकान्तरका लागि मनीषा अवस्थीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सुख्खा याममा विद्युत आपूर्तिका लागि के गरिरहनु भएको छ ?
आउँदो हिउँदको सुख्खा मौसमको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरेर आपूर्र्ति बढाउँदैछौं । यसपाली पनि सकेसम्म कहीँ पनि लोडसेडिङ हुन नदिने गरी हामी काम गरिरहेका छौं । अहिले गाउँघरहरुमा २/४ घण्टा लोडसेडिङ हुन सक्छ त्यो पनि उनीहरुलाई लोडसेडिङको अनुभूति हुन नदिने गरी । उद्योग क्षेत्रमा भने पिक आवरमा ३/४ घण्टा लोडसेडिङ हुनेछ । अलीकति बढाउनुपर्यो भने उद्योग क्षेत्रको एक दुई घण्टा बढ्न सक्छ तर सर्बसाधारणलाई भने लोडसेडिङ खेप्नु नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । गत वर्ष भारतबाट ३ सय ८० मेगावाट विद्युत आयात गरेका थियौं । यसपाली अलीकति विद्युत बढाउने सक्ने क्षमता भने छ । त्यसकारण यो वर्ष ४ सय मेगावाट आयात हुन सक्छ । ढल्केवर मुजफ्फपूर प्रसारण लाइन बनेको भए अली बढी लिन सकिन्थ्यो । यो वर्षको सुख्खायाममा मागको अवस्था १४ सय देखि १५ सय मेगावाट रहेको छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अठोटका साथ लागेको एक वर्षमा कस्ता खाले चुनौतीहरु देखिए ?
चुनौतीहरु अत्यधिक आए । खासगरी नीतिगत चुनौतीहरु अत्यधिक देखा परे । कुनै काम प्रक्रियागत कामहरु गर्ने भनेर लाग्दा समयमा काम नभइदिने नीतिगत समस्या देखिए । नयाँ तरिकाले काम गर्छु भन्दा खुट्टा तान्ने प्रबृत्तिहरु देखिए । यी पनि चुनौती नै हुन् । चुनौतीहरु हाम्रो अठोटसामु हार्छन् ।
सोलार प्यानल जडान एलइडी बल्ब खरिदमा देखिएको विवाद पनि ठूला समस्या छन् । हामी प्रक्रियाबाट बाहिर नजाँदा पनि विभिन्न निकायले पुर्वाग्रह राख्नु नै ठूला चुनौतीहरु हुन् । तर पनि व्यवस्थापनले काम गरिरहेका छ । विभिन्न विद्युत अयोजनाका कामहरु भइरहेका छन् । चमेलिया एक डेढ महिनामै आउँदैछ ।
खासगरी हामी वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न लागिरहेका छौं । क्षमताअनुसारका सवस्टेशन नहुँदा पनि हामीलाई ठूलो समस्या छ । सुरक्षाको विषय पनि गम्भीर समस्याका रुपमा देखिएको छ । तसर्थ दीगो भरपर्दो र सुरक्षित विद्युत प्रणालीको विकास र लोडसेडिङको अन्त्य गर्नुनै अहिले प्रमुख लक्ष्य हो । यो नै ठूलो चुनौती हो । किनभने हाम्रो क्षमता नै निकै कमजोर छ । यो अवस्थाको व्यवस्थापनमा हाम्रो टिम जुटिरहेको छ । अहिलेको कामको प्रगतिलाई हेर्दा आगामी २ देखि ३ वर्षमा करिब १३ सय मेगावाट विद्युत हाम्रो आफ्नै विद्युत उत्पादन हुन्छ । यसले करिब करिब माग धान्छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अठोटका साथ काम गरिरहँदा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आफूले जस लिने गरेको पनि देखियो । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
मैले त विद्युत क्षेत्रमा देखिएको प्रगतिमा मेरो पुरै टिम, सम्पूर्ण नेपाली जनता र सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई जस दिएको छु । त्यो बेलाको सरकारले पक्कै पनि जस लिने कुरा अन्यथा होइन । त्यो बेलाको सरकारको योगदान त छ नि । त्यसो त प्राधिकरकण पूर्व प्रमुखले सबै काम मैले गरेको हो भनेर पनि हिड्नुभएको छ । त्यसैले कसले के गर्यो र के भन्यो भन्दा पनि नतिजा के आयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । हाम्रो पालामा देखिने गरी नतिजा आयो तर यसमा पुरै मेरो मात्रै मेहेनत हो, मै मात्रै हो, अरु कसैको पनि योगदान छैन भन्न मिल्दैन । यसमा आम जनताको योगदान सबैभन्दा ठूलो छ । आम जनताले त लोडसेडिङ अन्त्यका लागि ठूलो साथ दिएका छन् । त्यसैले अझै पनि पनि भने, यो सामुहिक प्रयास हो । मेरो नेतृत्वमा आम जनता, आम राजनीतिक दल, सरकार, कर्मचारी सबैको साझा प्रयासले यो अन्त्य भएको हो ।
लामो लोडसेडिङ सजिलै पचाइरहेका नेपालीहरुले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भन्दा पनि घटे हुन्थ्यो भन्ने मात्रै अपेक्षा गरिरहेका थिए । त्यस्तो बेलामा अन्त्य नै गर्छु भन्ने प्रेरणा कहाँबाट आयो ?
मैले लामो समय यही क्षेत्रमा काम गरे । इलेट्रिकल इञ्जिनियर हुँ । योजनाबद्ध तरिकाले काम गरिएको हो । विद्युतको माग र आपूर्र्तिबारे अध्ययन गरेको छु, यही विषयमा थेसिस लेख्याछु । त्यसैले मेरा लागि यो नयाँ विषय भने होइन । यहाँको प्रणाली र व्यस्थापनबारे गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने मात्रै थियो । लोडसेडिङ भइरहे पनि अनूभति नहुने गरी गरेका छौं हामीले । अलीकति विद्युत पनि कसरी जोगाउने भन्नेमा विशेष ध्यान दिदाँ यो प्रयास सफल भएको हो ।
बल्ब खरिद विवादित भएको थियो, अहिले के छ यसको अवस्था ?
विवादित भएको होइन, विवादित बनाइएको हो । अहिले बल्ब आएको भए नेपाली जनतालाई कति सजिलो हुन्थ्यो, कति सस्तो पाउँथे ? यो बल्बले विद्युत खपत घट्छ भन्ने कुरामा आम जनता जानकार छन् । अहिले नेपाली बजारमा आएका चाइनिज बल्ब ४ सय रुपैयाँमा खरिद गरेर लाइरहेका छन् । हामीले १ सय ४ रुपैयाँमा दिने भनेका थियौं । हामीले त जनताको सहजताका लागि काम गर्न खोजेका हौं नि तर यहाँ त ठूला व्यापारीहरु लागे । ठूल्ठूला घराना लागे । उनीहरुले ठूलो भ्रष्ट्राचार गर्यो भनेर भड्काए । कसैले केही काम गरिरहेको छ भने विश्वास गर्नुपर्यो । हामीले अहिले करिब २ सय मेगावाट घट्छ भनेका थियौं । भारतमा यही किसिमको ७५ करोड बल्ब वितरण गरि नै सकेका छन् । ३० करोड वितरण गर्ने प्रक्रियामा छ । तर हामी कहाँ लोडसेडिङ पनि गर्न हुँदैन भन्ने, सोलार पनि जोड्न हुँदैन भन्ने अनि बल्ब खरिदलाई पनि विवादमा ल्याउने ? यस्तो पनि हुन्छ ?
नयाँ हामीले धेरै गरिरहेका छौं । खासगरी प्रणाली सुधारका पक्षमा काम गरिहेका छौं । भरपर्दो प्रणाली कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं, विद्युतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या सुधारका लागि काम गरिरहेका छौं ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा स्मार्ट मिटर ल्याउन लागेका छौं । देशभरीका प्रत्येक घरमा मिटर फेर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइरहेका छौं ।
स्मार्ट मिटरको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
प्राधिकरणले ग्राहकहरुको सुविधाका लागि ल्याउन लागेको स्मार्ट मिटरको छिट्टै बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । ग्राहकहरुले लामो समयसम्म लाइन बसेर महसुल तिर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति दिन प्राधिकरणले अनलाइन प्रणाली विकासका लागि स्मार्ट मिटरको अवधारण ल्याएका हौं ।
आगामी २ महिनाभित्रमा बोलपत्र आह्वान हुँदैछ । यो प्रविधि जडान भएपछि मोबाइल फोनमार्फत महसुल तिर्न सकिनेछ । अहिले जनताले ८० रुपैंया विजुलीको विल तिर्न धेरै पैसा र समय खर्च परेको छ, अझै अहिले ग्रामिण क्षेत्रमा जनताले सानो विजुलीको विल तिर्न एक दिनभरीको समय ५ सय देखि १ हजारसम्म पैसा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसैगगरी समयमा मिटर रिडिङ नहुँदा विद्युतको वास्तविक खपतबारे समेत थाहा हुन कठिन हुन्छ, त्यसैले यो प्रविधि ल्याउन लागिएको हो ।
स्मार्ट मीटर एक नयाँ प्रकारको विजुली मीटर हो जसले डिजिटल ऊर्जा विलको लागि डिजिटल ऊर्जाको आपूर्तिकर्तालाई डिजिटल रूपमा पठाउन सक्छ । स्मार्ट मीटर जडान गरिसकेपछि आफुले प्रयोग गरेको विजुली र विल मिटरले नै देखाउँछ । यो मिटरले प्रत्येक घण्टामा खपत हुने विद्युतबारे जानकारी दिन्छ ।